तालिका प्रतिस्थापन गर्नुहोस्
तपाईँले टाइप गर्दा स्वचालित तवरले शब्दहरू र पंद्यासहरूका लागि प्रविष्टिहरू सूची गर्छ । एउटा प्रविष्टि थप्न, प्रतिस्थापन र सहित बाकसहरूमा पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि New । एउटा प्रविष्टि सम्पादन गर्न, यसलाई चयन गर्नुहोस् With बाकसमा परिवर्तन गर्नुहोस् र त्यसपछि Replace क्लिक गर्नुहोस् एउटा प्रविष्टि मेटन यसलाई चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि मेट्नुहोस्क्लिक गर्नुहोस् ।
तपाईँले एउटा पंद्यास वा शब्दको एउटा निर्दिष्ट क्यारेक्टर ढाँचा लागू गर्न स्वत: सुधार विशेषता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईँको कागजातमा ढाँचा गरिएको पाठ चयन गर्नुहोस् यो संवाद खोल्नुहोस्, पाठ मात्र बाकस खाली गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले बदल्नुहोस् बाकसमा बदल्न चाहेको पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
तपाईँले एउटा स्वतसुधार प्रविष्टिमा फ्रेमहरू, ग्राफिकहरू, र OLE वस्तुहरू पनि समाविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पाठमा तिनीहरू क्यारेक्टरहरूको रूपमा एङ्कर गरिएको लम्बाइ अनुसार वस्तुको अगाडि र पछाडि फ्रेम, ग्राफिक वा OLE वस्तु र कम्तीमा एउटा क्यारेक्टर चयन गर्नुहोस् यो संवाद खोल्नुहोस्, यो स्वतसुधार प्रविष्टिका लागि प्रतिस्थापन गर्नुहोस्बाकसमा एउटा नाम टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि नयाँ मा क्लिक गर्नुहोस् ।
तपाईँले बदल्नुहोस् गर्नुहोस् बाकसमा बदल्नुहोस् गर्न चाहेको बदल्नुहोस् पाठ, ग्राफिक, फ्रेम, वा OLE वस्तु प्रविष्ट गर्नुहोस् यदि तपाईँको कागजातमा तपाईँले पाठ, एउटा ग्राफिक, एउटा फ्रेम, वा एउटा OLE वस्तु चयन गर्नुभएको छ भने, सम्बन्धित जानकारी पहिल्यै यहाँ प्रविष्टि गरिएको हुन्छ ।
ढाँचा नगरिकन With बाकसमा प्रविष्टि बचत गर्दछ. दगलीसकेकेपछि, पाठले कागजात पाठको जस्तो समान ढाँचा प्रयोग गर् ।छ.
बदल्नुहोस् तालिकामा एउटा प्रविष्टि थप्छ वा बदल्दछ ।
Title is: बदल्नुहोस्